I-Oro Agri Yurophu-iSayensi ixhaswa yiNdalo
I-Oro Agri yamanye amazwe
I-Oro Agri yaseYurophu
Guqula imenyu yokuhamba
Amaqabane ethu aSebenzayo
Isichumisi / Izondlo
Isikhokelo seNkampani 2021
Isikhokelo seZityalo eziKhuselweyo
Incwadana ye-FAQ ye-OROBAC ™ 100
Isikhokelo soPhando lwePotato
Isikhokelo sePome Fruit Application
Isikhokelo seZiphumo zeMidiliya
Iiprojekthi zeR & D / Projetos de I&D
Umatshini wokucoca i-OSB-OXIDE kunye ne-Biocide
Ukubeka iliso kwiCleistothecia 2019
Ukubeka iliso kwiCleistothecia 2018
Iindaba / Cinezela
IMIBUZO YOMBUZO WET
YENZA IMIBUZO YOMBUZO KA-K26
Umsebenzi wethu kukuqhubeka nokuzisa ukukhuselwa kwezityalo ezinobuchule kunye nokusingqongileyo kunye nezisombululo zokuphucula imveliso kwindawo yentengiso.
Iiprojekthi ezixhaswe ngemali yi-EU:
Ukondla uMhlaba ngokuSungula
Sivelisa iimveliso ezikhuselekileyo kumsebenzisi nakwindawo esingqongileyo kwaye sinika isisombululo esisebenzayo, kodwa esisisalela simahla kubathengi bethu.
Bona iimveliso zethu
Ngeendlela ezizodwa zezenzo kunye neendlela ezichanekileyo zokufaka isicelo iimveliso zethu zisetyenziswa ngokuhambelana nezikhokelo zamva nje ukuze zisebenze ngakumbi, kodwa zikhuseleke kwindalo esingqongileyo. Ukuze wazi ngakumbi, ndwendwela icandelo lethu le-FAQ.
Jonga icandelo lethu le-FAQ
Ukubeka iliso kwiCleistothecia
Uvavanyo lwepropathi ekusetyenzisweni kokuwa kolwakhiwo oluneeoyile eziyimfuneko ezikhutshwe kwi-citrus sinensis ukunciphisa i-erysiphe necator cleisthotecia
Jonga iiProjekthi zethu
Nge-R & D kunye namaqela enkxaso yezobuchwephesha asekwe eYurophu nakwihlabathi liphela sihlala sikhangela iimveliso ezintsha ezinokuphucula izivuno kunye nokugcina impilo yezityalo.
Bona iividiyo zethu
Ukuqhubeka kotyalo-mali lwe-R & D
Singumboneleli wenkulumbuso okhuselekileyo, okhusela indalo, ukukhusela isivuno kunye nezisombululo zokuphucula imveliso kurhwebo lwehlabathi kunye nabathengi.
I-Oro Agri International Ltd (phantsi kwegama lethu i-ORO AGRI) iphuhlisa kwaye ivelise iimveliso ezinelungelo elilodwa lomenzi wezolimo, ekhaya nakwizicelo zorhwebo kwihlabathi liphela. Sigxininisa kwiimveliso ezikhuselekileyo kumsebenzisi nakwindawo esingqongileyo kwaye ziya kubonelela ngokusebenzayo, ukanti isisombululo esingenantsalela kubaxumi bethu.
Inzululwazi Inikwe amandla
Gcina kunye neendaba zamva nje malunga nenkampani yethu kunye neemveliso ezikhuselekileyo kumsebenzisi nakwindawo esingqongileyo kwaye zibonelela ngesisombululo esisebenzayo, kodwa esisisalela simahla kubathengi bethu.
Sigxininisa kwiimveliso ezikhuselekileyo kumsebenzisi nakwindawo esingqongileyo kwaye ziya kuthi zibonelele ngesisombululo esisebenzayo, kodwa esisalele intsalela kubaxumi bethu. Iindidi zeMveliso zibandakanya abancedisi, inambuzane, izinto zokulungisa umhlaba or ukutya kwamagqabi.
Amagcisa ethu asentsimini aqhuba izifundo ezisebenza ngempumelelo kubalimi bengingqi kwaye ancede abasasazi ngeeseshoni zoqeqesho ukufundisa uluntu lwezolimo malunga nokusetyenziswa kwe-ORO AGRI Uluhlu lwemveliso.
I-PREV-AM® yonke into yokubulala izinambuzane, i-fungicide kunye ne-acaricide
INTSHAYELELO ™ Intshayelelo
UmGuquleli womhlaba weTransformer
I-WETCIT ™ Iyanceda
Isikhokelo seZinambuzane kunye neMites
AmaQela okuSebenza e-ORO AGRI
Ukubandakanya ubambiswano lobuchule kubalulekile ekusincedeni ukuba sandise izisombululo esizibonisayo kubalimi kwihlabathi liphela. Amaqabane ethu asebenzayo anikezela ngeenkonzo ezahlukeneyo ezisinceda ukuba siqhubeke nokuzisa izisombululo kwimarike. Ezi nkonzo zibandakanya isatifikethi, uqeqesho, uphando kunye nemithombo yeendaba. Sikwanamaqabane asebenzayo abandakanyekayo kuphuhliso lwamaphandle noluntu, olusebenzela ekwenzeni ulwazi kunye nesayensi zifikeleleke kubo bonke. Siyaqhubeka sandisa uthungelwano lwethu lwentsebenziswano kwaye samkela nabani na osincedayo ekuqinisekiseni ukuba iimveliso zethu zisetyenziswa ngokuchanekileyo nangokufanelekileyo ngamafama, ukukhusela izityalo zabo kunye nokusingqongileyo.
Umboneleli wenkulumbuso okhuselekileyo, onobungqongileyo, ukukhuselwa kwesityalo kunye nezisombululo zokuphucula imveliso kurhwebo lwehlabathi kunye nabathengi.
I-Oro Agri International Ltd (phantsi kwegama lethu i-ORO AGRI) iphuhlisa kwaye ivelise iimveliso ezinelungelo elilodwa lomenzi wezolimo, ekhaya nakwizicelo zorhwebo kwihlabathi liphela. Sigxininisa kwiimveliso ezikhuselekileyo kumsebenzisi nakwindawo esingqongileyo kwaye ziya kuthi zibonelele ngesisombululo esisebenzayo, kodwa esisalele intsalela kubaxumi bethu.
Zombini, ukufikelela kwethu kwimakethi kunye noluhlu lwemveliso lwandile kwaye ngoku akhoyo kumazwe asibhozo anesixhenxe kwihlabathi liphela.
Iqela le-ORO AGRI lenza kumazwekazi amane ahlukeneyo aneefektri eMelika, eBrazil, eMzantsi Afrika kwaye ngoku yiPortugal.
Iqela le-ORO AGRI lineetekhnoloji ezininzi ezinelungelo elilodwa lomenzi. Uphando lwethu lujolise rhoqo ekufumaneni usetyenziso olutsha lwetekhnoloji yethu.
Khetha ukuhanjiswa kumazwe angaphezu kwama-85 kwihlabathi liphela. Ngaphezulu kwama-2,000 + abathengisi okanye abathengisi abathengisa iimveliso ze-ORO AGRI kwilizwe jikelele. Abasebenzi abali-180 abakumazwe angaphezu kwama-23.
Itekhnoloji enelungelo elilodwa lomenzi wechiza
Amaqela e-R & D kunye neenkonzo zenkxaso yezobugcisa ezinze eMzantsi Afrika, eBrazil, eUnited States naseYurophu. Iilebhu zoQeqesho noPhuhliso ePortugal, eBrazil, eMzantsi Afrika naseMelika.
Siphuhlisa kwaye sivelise iimveliso ezinelungelo elilodwa lomenzi, kwaye sigxile kwimveliso ekhuselekileyo kumsebenzisi nakwindawo esingqongileyo kwaye sinika isisombululo esisebenzayo, kodwa esisisalela simahla kubathengi bethu.
Inzululwazi Inikwe amandla yiNdalo®
I-Oro Agri yaseYurophu eMzantsi Afrika
INkomfa yeHlabathi ye-BioControl 2021
Ukuzisa iOROBAC ™ 100
Ubhaliso olutsha / ugunyaziso
YENZA I-K26® igunyaziswe eFrance yi-ANSES
Ilungelo lokushicilela 2021 © ORO AGRI Yurophu. Onke amalungelo agciniwe.
Sisebenzisa ikuki ukukunika amava okukhangela okungcono, ukuhlalutya ukugcwala kwesiza, kunye nokwenza umxholo ube ngowakho. Funda malunga nendlela esizisebenzisa ngayo iicookies kwaye ungazilawula njani ngokunqakraza ku "Ukukhetha Okungasese." Ukuba uqhubeka nokusebenzisa le ndawo, uyavuma ukusebenzisa kwethu ikuki.
Izicwangciso ze Cookie
Ukuhlaziya kunye neeKuki zokwenza ngokwezifiso
Enkosi ngokundwendwela iwebhusayithi ye-ORO AGRI kwaye uphonononge umgaqo-nkqubo wabucala. Umgaqo-nkqubo wethu wabucala ulula: asiqokeleli zinkcukacha ngawe xa undwendwela iwebhusayithi yethu ngaphandle kwedilesi ye-IP ongena kuyo ukuze uye kwilizwe elithile leemveliso zethu. Oku kwenzelwa ukunceda wena. Nantsi indlela esijongana ngayo neenkcukacha malunga notyelelo lwakho kwiwebhusayithi yethu: Ulwazi oluqokelelweyo nolugciniweyo ngokuzenzekelayo Iseva yewebhu ye-ORO AGRI ayiqokeleli ngokuzenzekelayo okanye igcine naluphi na ulwazi olungagqibekanga ngaso nasiphi na isicelo se-http esifunyenweyo. Siyayamkela idilesi yakho ye-IP ukuphinda unqabise umsebenzisi wegunya elithile kwiphepha lewebhu elifanelekileyo lelizwe. I-imeyile I-imeyile engeniswe kwi-ORO AGRI ifunyanwa kwi-akhawunti yebhokisi ye-imeyile edityaniswe info@oroagri.com okanye legal@oroagri.com kodwa ayigcinwanga kwiseva yewebhu konke konke. Ukusetyenziswa kweeKuki eziQinisekayo kunye neTekhnoloji yokuLanda asisebenzisi iikuki ezingapheliyo okanye ubuchwephesha bokulandela umkhondo, obunje ngezo zisetyenziselwa iseshoni yokwenza ukubuyela kweendwendwe, kwiwebhusayithi yethu. Xa iseshoni yakho igqityiwe, ikuki iyayeka. Ukuba unayo nayiphi na imibuzo okanye inkxalabo, nceda unxibelelane nathi kule dilesi ye-imeyile legal@oroagri.com
Ezi kuki ziyimfuneko ngokungqongqo ukuze zikunikeze ngeenkonzo ezifumaneka kwiiwebhusayithi zethu kunye nokusebenzisa ezinye zeempawu zalo, ezinjengokufikelela kwiindawo ezikhuselekileyo. Ngenxa yokuba ezi kuki ziyimfuneko ngokungqongqo ukuhambisa iiwebhusayithi, awunakuzala ngaphandle kokuchaphazela indlela ezisebenza ngayo iiwebhusayithi zethu. Ungazibhloka okanye uzicime ngokutshintsha useto lwesikhangeli sakho, njengoko kuchaziwe phantsi kwesihloko esithi "Ndingazilawula njani ii-cookies?" kwiNgxelo yeKuki.
gdpr [ii-cookie ezivunyelweyo], gdpr [iintlobo_ zemvume], wc_cart_hash_ #, wc_fragments_ #
Ezi kuki ziqokelela ulwazi olusetyenziswa kwifom edibeneyo ukusinceda siqonde indlela ezisetyenziswa ngayo iiwebhusayithi zethu okanye zisincede senze ngokwezifiso iiwebhusayithi zethu ukuze sandise amava akho.
_ga, _gat, _gid, uqokelele
Le khukhi isetyenziselwa ukuthumela idatha kuGoogle Analytics malunga nesixhobo kunye nokuziphatha kwendwendwe. Ilandelela undwendwe kwizixhobo nakwiindlela zentengiso. Le khukhi isetyenziselwa ukwenza imiyalezo yentengiso ifaneleke ngakumbi kuwe nakwimidla yakho. Ikwenza imisebenzi njengokuthintela intengiso enye ekuqhubekekeni ukuvela kwakhona, iqinisekisa ukuba iintengiso ziboniswa ngokufanelekileyo, kwaye kwezinye iimeko kukhetha iintengiso ezisekwe kwiminqweno yakho.
r / ukuqokelela